Faah faahin dheeraad ah oo ku saabsan dagaal dhexmaray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Xarakada Al-shabaab.
on September 15 2013 Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helaayaa dagaal culus oo habeenkii xalay ka dhacay deegaan ka tirsan degmada Aw-diinle ee gobalka Bay, kaas oo sida la sheegay u dhaxeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Xarakada Al-shabaab.
Dagaalkaas ayaa sida la sheegay ka dhacay deegaanka Dhambal oo ka tirsan degmada Aw-diinle, waxaana uu ku bilaawday ka dib markii ciidamo ka tirsan Xarakada Al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen fariisimo ay halkaasi ku lahaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya.
Inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkaasi ku geeriyootay ilaa 3 qof, tiro intaas ka badane waa ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta degmada Aw-diinle ee gobalka Bay.
Maxamed Sheekh C/laahi oo ah gudoomiyaha degmada Aw-diinle ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in dagaalka xalay uu ku bilaawday weerar ay marka hore soo qaadeen ciidamada Al-shabaab, waxaana dagaalkaasi la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in dadka waxyeeladda kasoo gaartay dagaalkaasi ay ahaayeen dhinacyadii dagaalay, isagoona xaqiijiyay in wax qasaare ah aanu soo gaarin dadka shacabka ah ee ku sugan deegaanka uu dagaalka ka dhacay.
Dhinaca kale ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan degmada Aw-diinle ee gobalka Bay ayaa saakay waxay howlgalo culus ka bilaabeen deegaanada ka tirsan degmadaas, iyadoona howlgaladaasi looga gol-leeyahay sugida amaanka halkaas.
Xafiiska Warbaahinta Bulshoweyn.com ee Magaalada MuqdishoNagala Soo Xiriir:- info@bulshoweyn.com